Fanarenana ny Air Madagascar : Vita ny fifanaovan-tsonia tamin’ny Air Austral -
AccueilRaharaham-pirenenaFanarenana ny Air Madagascar : Vita ny fifanaovan-tsonia tamin’ny Air Austral
Efa nandritrin’ny volana maromaro no nisian’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Air Madagasikara sy ny Air Austral, saingy omaly vao nomarihana tamin’ny fomba ofisialy izany. Dingana voalohany hataon’ny roa tonta ny fanarenana ity kaompaniam-pitaterana an’habakabaka malagasy ity. Eo koa ny famolavolana paikady vaovao entina hanamafisana orina ny fanarenana ny Air Madagasikara.
Teny amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra no nanatanterahana izany lanonana fifanaovan-tsonia izany, omaly, ka nanatrika izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Hanome hery vaovao ny lafin’ny fizahantany sy ny fitaterana an’habakabaka ny fahavitan’izao fifanaovan-tsonia izao. Nazava ny fanazavan’ireo tompon’andraikitra avy amin’ny andaniny sy ny ankilany fa samy hahazo tombontsoa amin’izao fiaraha-miasa izao, na ny kaompania Air Madagasikara, na ny Air Austral.